Saturday September 09, 2017 - 10:09:22 in Maqaallo by Reporter Burco
Maalinta aynu arkayno dumar qabanaya shaqooyinka dawladda, tiro ahaanna u dhigma ragga, ee aynu odhan karno; dumarku waxa ay leeyihiin xuquuq la mid ah ta ragga
ee qabashada xililka dawladdu waa mid u baahan mudo aad u dheer. Si aynu u fahano natiijada togan ama taban ee ka dhalan karta in dumarka lagu aamino xafiisyada dawladda, waa in aynu saadaalinaa bulsho ay inta badan dumarkeedu shaqeeyaan, ama wax u bartaan si ay shaqo u helaan.
Natiijada koobaad ee ay tahay in aynu tixgalinaa waa in aynu qirno in dumarku buuxin karaan boosaska shaqada, si la mid ah sida ragga. Haddii aynu taa qirno, waxa aynu aqoonsannay mid ka mid ah waxyaababaha ugu muhiimsan ee ay dumarku inaga dalbanayaan oo ah in ay qaban karaan shaqo walba. Hadaba, natiijada tan ka dhalan kartaa waa haddii la helo dumar ah qoraa, dhakhaatiir, injineero iyo garsoorayaal, sidoo kale waxa la helayaa dumar noqda xubno baarlamaan iyo wasiiro. Halkaa marka ay marayso akhristuhu waa in uu ogaadaa in sawirka aan bixinayaa uu yahay mid ka hadlaya mustaqbalka fog – runtii waxa laga yaabaa mustaqbal aad u fog. Hadaba, waxa aan ka hadlayaa wakhti ay badi dumarku shaqaystaan, gaar ahaan, dumar badani ay hayaan xilal dawladdeed, taas oo ah ta su’aashu ka taagan tahay.
Waxa sidoo kale aynu isku arki doonnaa mushkiladdo badan oo dadka ku nool wadamada horumaray ka cawdaan: dhibaatada shaqo la’aanta. Shaki kuma jiro, in tartanka ka dhexeeya gabdhaha iyo wiilasha uu gali doonno goobaha shaqada, tan oo keeni doonta in dad badan oo soo qalinjabiyay ay shaqo la'aan ku dhacaan. Waxa intaa dheer, waxbarashadooda oo caadiyan ah mid aanay gacanta wax ka qaban karin, iyo in ay barteen faracyada kala duwan ee aqoonta ayaa garan siin doonta in ay aaminaan in aanay qaban karin shaqooyinka bulshadu u baahan tahay ee suuqa looga baahan yahay. Waxa laga baqanayaa in ay ku noqdaan bulshada oo ay ka hor yimaadaan shuruucda wadanka.